Shina nohamafisin'ny orinasa borosy borosy nify maranitra sy mpanamboatra | Enyuan
Borosy nify maranitra maranitra
Ny borosy nify arina volotsangana dia nomena anarana taorian'ny nanampiana arina volotsangana ho an'ny volony. Ny lokony dia tsy mitovy amin'ny borosy nify nentim-paharazana. Satria ampiana saribao volomparasy C ny ionoka mavitrika C izay alaina avy amin'ny arina volotsangana, dia mainty voajanahary ny loko. Ity bioteknolojia ity dia nekena. Natao ho borosy nify mba hanakanana ny fisefoana sy ny olana am-bava hafa.
anaran'ny vokatra borosy nify arimoam-bolo
Fitaovana boribory sarina arina volotsangana
Fitaovana borosy borosy p + tpr
Savaivony borosy 0.18mm
0.18mm volo manify manify
Ny loha borosy voafantina tsara, miaraka amin'ny filamenta fohy, dia manadio ny elanelana misy eo amin'ny nify, miaraka amin'ity faritra tsy miolaka tokana ity, mitondra traikefa vaovao amin'ny fanadiovana nify
Sombina arina volotsangana
Ny arina volotsangana avo lenta dia alefa ho vovoka manify, izay manana tanjaka maingoka amin'ny adsorption ary afaka mandray ny residu sy fofona avy amin'ny sakafo. Afaka manamaina ny volon'ondry haingana, mitazona madio, azo antoka ary hadio
Ny lokony dia tsy mitovy amin'ny borosy nify nentim-paharazana. Satria ampiana arina volomparasy C ions mavitrika nalaina avy amin'ny arina volotsangana, dia mainty voajanahary ny loko, izay miavaka sy feno toetra.
Ny arina bararata C, ny iôna mavitrika dia atôma super-energie C misy rafitra tambajotra nalaina avy amin'ny arina volotsangana ambanin'ny hafanana avo sy ny fanerena be, ary mampiasa teknolojia haitao avo lenta mba hampifangaroana ny vaingam-bozaka C amin'ny ionoka mavitrika miaraka amin'ny volon-tratra hamokatra adsorption, hamandoana. fanoherana, fanaraha-maso ny hamandoana ary fahaizan'ny Antibacterial, afaka mamoaka taratra infrared lavitra sy ion-ôksizena ratsy koa izy. Izy io dia fantatra ho mpiambina ny taonjato faha-21. Ampiasaina be amin'ny faritra maro amin'ny andavanandrom-piainan'ny olona izany.
Ny savaivony ambony amin'ny volom-borona dia 0.18mm, 8, izay afaka manadio tsara ny valan-javaboary sy ny tonon-taolana izay tsy azo idirana amin'ny borosy nify tsotra, esory moramora ny calculus nify sy ny takelaka nify, manatsara ny hery fanadiovana borosy nify, mampihena ny tahan'ny tranga ny periodontitis, ary aza manisy ratsy ny fonon-tarehy nify, mba hiarovana ny fahasalamana sy ny fahadiovan'ny nify.
Ny dingan'ny fikosohan-nify dia ny dingan'ny fanorana moramora amin'ny tendrony miaraka amin'ny tampon'ny volomaso kely. Raha ampitahaina amin'ny borosy nify mahazatra, ny borosy nify arina volomparasy dia afaka mampihena ny tsindry amin'ny gingiva ary mampihena ny fisehoan'ny loko mena sy ny fivontosana.
Previous: oem malefaka borosy borosy borosy nify kely
Manaraka: Aretin-koditra boribory boribory boribory aretin-nify
Boribory borosy nify bakteria
Borosy nify bakteria
Borosy borosy nify bakteria arina volotsangana
Antibacterial an'ny borosy nify